Mareykanka: Dimuqraadiga Pete Buttigieg oo ku dhawaaqay musharrax madaxweyne - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »US: Dimuqraadiga Pete Buttigieg oo ku dhawaaqay musharaxa madaxweynenimo
Mareykanka: Dimuqraadiga Pete Buttigieg oo ku dhawaaqay musharraxa madaxweyne
37, duqa magaalada magaalooyinka warshadaha ee Indiana Axad ayaa bilaabay ololihiisa doorashada magacaabista Dimoqraadiyada.
Liisaska tartamayaashu waxay sii wadaan inay koraan. Pete Buttigieg, oo ah duqa magaalada dhalinyarada ah oo furan oo ku yaal magaalada bartamihii dhexe ee duullimaadyada warshadaha, taas oo noqotay dhacdo bilawga ololaha madaxtooyada, si rasmi ah loogu shaaciyay Axaddii Magacaabista Dimuqraadiga ee 2020.
AKHRIYO ALSO >> "Trump waxay ku dhiirri-galineysaa dimuqraadiyada inay kufsadaan"
Sanadihii 37, qalinjabintan millenniyadeed ee Harvard, oo leh shaqaale horumarineed iyo kuwa ka shaqeeya ciidamada Mareykanka ee Afgaanistaan, ayaa ku dhawaaqay himiladiisa kulan dadweyne oo ka dhacay magaalada koonfurta magaalada Bend: Donald Trump laga bilaabo Aqalka Cad.
"Waxaan iibinaa quraafaad ah in bulshooyinka reer miyiga ah iyo warshadaha" in "la joojiyo karaa waqti iyo dib ugu," ayaa sheegay in uu ka hor dadkii badnaa farxad gelineysa a naadiyey, tilmaamayaa in dhigyo Donald Trump tumay muddo sanado ah: "Ka dhigo weynaantiisa America".
7 malaayiin dollar ayaa kor u kacay
"Haddii ay jiraan hal shay oo South Bend ah oo muujinaya, waxaa jirta inaysan jirin siyaasad daacad ah oo ku salaysan ereyga 'weli'", waxa uu ku guuleestay musharaxii tartanka dhalinyarada laakiin isku mar. codka qoto dheer, oo qaadaya weerar cusub oo lagu qaado madaxweynaha maraykanka. Wuxuu ku dhashay magaalada Indiana, Pete Buttigieg kaliya kuwa dhulal in Jamciyadda doorashada ay guushu ku Donald Trump, ee "miridhku Belt", ka "suunka miridhku" waqooyi-bari ee Maraykanka oo ay waxyeeleeyeen hoos u dhaca warshadaha.
AKHRIYO ALSO >> Joe Biden, ayaa sidoo kale la taaban karo si uu u noqdo musharax xilli-ciyaareedka #MeToo?
polyglot Tani ururiyay 7 million ku darsaday, ka badan inta badan tartanka, oo waa meel saddexaad ee doorashada ugu danbeysay ee horu dhaca ah ee Iowa iyo New Hampshire, dalalka ugu horeeya si ay u codeeyaan.
Axadii, ka dib markii dhowr dacwadood lagu soo oogay Donald Trump iyo Jamhuuriyeyaashii, wuxuu isku dayay in uu kor u qaado doodda wuxuuna soo gudbiyaa farriin rajo iyo rajo, isagoo isu soo taagaya xoog ciidan. Haddii uusan soo bandhigin hindise la taaban karo, wuxuu soo xusuustay qiimaha uu ku xiran yahay: sinaanta iyo sinaanta jinsiga, xuquuqda waxbarashada iyo caafimaadka, siyaasad guuritaan oo sababaysan, ilaalinta shaqaalaha iyo la dagaallanka isbeddelka cimilada.
Ku dhaqma Christian
Wargeyska ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay warbaahinta dalkaasi, wuxuuna sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in uu ka qeyb galo tartanka doorashada. Jacaylku wuxuu qayb ahaan la xiriiraa waxa uu noqon doono inuu soo galo Aqalka Cad. Pete Buttigieg wuxuu noqon lahaa kii ugu da'da yaraa ee ugu horreeyay ee madaxweynaha khaniisiinta ah ee Maraykanka.
Sunday, kuwaas oo si rasmi ah u noqday Musharaxa ugu horeeyay ee meydhaa madaxtooyada qof oo isku jinsi ah ku celiyay in go'aanka wanaagsan ee Maxkamadda Sare guurka ee dhammaan (in 2015) ayaa wuxuu u bixiyey "xorriyad ugu muhiimsan ee uu noloshiisa ".
"Waxaan kuu sheegi karaa in haddii xaqiiqada ah in aan khaniis ahaa doorasho, waa doorasho la sameeyey sare, aad u sarreeya", ayaa sheegay in ka hor this Christian barbarta, diin guursan 2018 saaxiibkiis, edbi, taas oo wuxuu qaatay magaciisa rasmiga ah.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/etats-unis-le-democrate-pete-buttigieg-annonce-sa-candidature-a-la-presidentielle_2073095.html
Dab-demiska Notre-Dame de Paris: dhismuhu waa "badbaadiyey"